Daawud Ibsaa, HD ABO, irratti maaltu raawwatame? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDaawud Ibsaa, HD ABO, irratti maaltu raawwatame?
An attack on Dawud Ibsa is an attack directed against the Oromo people’s struggle for the right of self determination.
Oromo people all over the world should react united to protest this act of state terrorism by Abiy Ahmed group, that has already declared war all over Ethiopia, particularly in Oromia and Tigray.
Source: FB – Irbuu Shinniiggaa
Guyyaa har’aa caamsaa 3/2021 galgala keessa akka sa’aatii Oromiyaatti waraanni humna addaa magaalaa Finfinnee oraaliin fe’amee gara Mana jireenyaa HD imaluun balbala rurrukutanii akka isaan banan gaafatan.
Yeroo kanatti nama halkan dhufeef eenyummaa isaa hin beeknu hin bannu jechuun balbala isaanii jabeessatanii cufachuun banuu didan.
Humni waraanaa Finfinnee humna waraanaa dabalataa waammachuun waardiyoota ammaan dura Mootummaan ramadee HD ABO Jaal Daawud eegumsa godhan itti bilbiluun akka banan gaafatan ammas waardiyoonni kunneen Furtuu cufameera Furtuu of harkaa hin qabnu banuu hin dandeenyu jechuun Poolisoota alaan akka bananiin isaanitti bilbila itti deebii kennan.
Yeroo kana humna waraanaa magaalaa Finfinnee kun waraana dabalachuun ammas balbala Mooraa isaanii meeshaalee ittiin cabsanii seenan fichisiifachuun hulaa balbalaa buqqisuu naannoo sa’aatii 4:00 akka Oromiyaatti cabsanii seenuun namoota mooraa HD keessa jiraatan hunda bakka tokkotti qabuun reebicha irraa eega gahanii booda bakka tokkotti isaan ugguruun manatti ol seenuun sakatta’aa cimaa gaggeessuun meeshaalee mana HD keessa jiran electronics tahan TV qofaa akka dhiisaniif bilbiloota harkaa namoota mana sana keessa jiraatanii dabalatee ajandaa kee HD yaadannoo isaanii akkasumas waraqaa adii kan jedhamee fi barruu kan tahe hunda fuudhuun kanneen saaman saamanii qarshii fuulduraa argatan kudhanis tahu 100 irratti wal saamaa giipha isaanii keessa kaayyachaa mana keessaa qodaa caccabsuun mana duwwaa godhanii deeman.
Yeroo ammaa kana balballi mana jireenyaa HD cufan taane isaa waan cabeef akkasumaan banaa jiraachuu SQ mirkaneeffateera.
Yeroo taateen kun tahe sa’aatii 2:00 – 6:00 ummata taatee kanaaf dirmachuuf achi imale daandii irratti dhukaasa itti banuun miidhaa namoota irraan geesisaa akka turanis waraanni humna addaa Finfinnee SQ hordoffii godheen mirkaneeffateera .
Dhukaasa itti fufinsaan karaa church Gabreelii gaggeeffamaa tureen Miidhaan qaama nama nagaa irra tahuus ammaaf kan maqaan adda hin baane irra gahuu barameera.
Taateen kun kan qindaaye MM itiyoophiyaa Abiyyii Ahimediin tahuu odeessa Qaruuxeen Qeerroo sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof ergeen baruun dandahameera .
Taateen Yeroo ammaa sa’aatii gabaasaa kana qindeessinutti balballi mana jireenyaa banaa jiraachuu fi quunnamtiin achi keessaa guutummaa guututti citee jiraachuu irraa kan ka’e erga naannoo sanaa ummatni itti dhukaafamee ariiya mee waan tahe hubachuun hin dandahamne Wanti ummatni keenya bal’aan hubachuu qabu namoota mana jireenyaa HD keessa jiraatan irratti reebichi humnaa olii gaggeeffamee miidhamanii jiraachuu SQ mirkaneeffateera.
Waardiyoota mootummaan ammaan dura ramadee jirus Akka lakkisanii deemaniif meeshaa isaanii ammaan dura qaban Shugguxii (pistol) isaanii irraa fuudhuun isin ammaan booda as bultan jennaan isin irratti tarkaanfii fudhanna jechuun waraanni humna addaa ajaju kun ijoolleen waardiyootaa huccuu fi meeshaa qaban fudhachuun mana HD lakkisanii bahanii jiru.
Yeroo ammaa kana bakka balballi mana jireenyaa isaanii banaa tahee jirutti waardiyootni ammaan dura isa eegan irraa fuuldhatamanii jiraachuun beekameera.
Maaltu itti sana isa jedhu gabaasaa Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo qoratu in ummataaf kan dhiyyeessinu taha.
Mootummaan Dr Abiyyiin durfamu HD ABO jaal Daawud Ibsaa ajjeesisuuf halkaniif guyyaa dalagaa akka jiru…